Alliance Voahary Gasy (AVG) : «Mitohy ihany ny trafikana andramena» - Informations et Actualités sur Madagascar
Economie Alliance Voahary Gasy (AVG) : «Mitohy ihany ny trafikana andramena»
Alliance Voahary Gasy (AVG) : «Mitohy ihany ny trafikana andramena»
by Alpha world on 09 h 39 in Economie
Écrit par Taratra
Mbola raharaha mafana ny trafika andramena. Araka n y loharanom-baovao azon’ny Alliance voahary gasy (AVG), misy ny fikasana hamoahana andramena any Antalaha sy Soanierana Ivongo any. Tsy hita ny vahaolana maika andrasana amin’ny fanjakana.
Mifanipaka ! Tsy mitovy ny fijery sy ny fahitan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Ekôlôjia ary ny Ala (Minenvef) ny tontolon’ny andramena sy ny fikambanana fiarahamonina sivily, Alliance voahary gasy (AVG). Etsy andaniny, nanome toky ny minisitera, fa tsy tokony hisy sambo tsy ara-dalàna hanao trafika andramena satria efa misy ny fanaraha-maso avy amin’ny zana-bolana ny fivezivezena an-dranomasina rehetra. Niaiky anefa izy ireo fa misy tokoa ireo mikasa hanohy ny fikapana hazo andramena vaovao any anaty ala, ka noho izay indrindra no haminavinan’ny minisitera hidina tampoka any an-toerana hanatrarana « ambodihazo » ireo mpanao trafika.
Handray andraikitra ny zandary ?
Etsy ankilany anefa, nanamafy ny AVG, fa tsy araka izany velively ny tena zava-misy.
Nahazo loharanom-baovao izy ireo fa misy ireo mpanao trafika ankehitriny. Raha ny vaovao farany, misy sambo efatra, afaka mitondra entana hatrany amin’ny 25 taonina avy, niainga avy any Mananara Avaratra ary ho any Antalaha, niainga nanomboka ny 23,24 ary 25 aogositra teo. Voalaza fa efa nisy nampandre ity vaovao ity ny zandarima ria any Mananara-Avaratra ary efa nandefa mpitandro filaminana any ifotony. Fanadihadiana sy fisamborana no andraikitry izy ireny, saingy mbola ao koa ny Fitsarana, manameloka na tsia. Hatreto aloha, tsy nisy ny « tena atidoha » voasazy.
Mialoha ity tranga ity, efa nanaitra ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny AVG, mikasika ny fikapana hazo andramena any amin’ny alan’Ambatovaky, Kambolaza ary any amin’ny tandavanalan’i Manompana. Voalaza fa taterina amin’ny renirano ny hazo avy any Andapavola, na Antanambe na Andrangazaha, any amin’ny manodidina an’i Soanierana Ivongo.
Toky no betsaka
Raha tsiahivina, ny filoham-pirenena no nanome toky fa hamaky ady amin’ny mpanao trafika andramena. Talohan’izany, nisy mpanao politika teo aloha nilaza fa manana ny anaran’ireo mpanao trafika. Ny taona 2011, nisy koa ny horonan-tsary novokarin’ny vahiny mikasika ny zotra sy tambajotran’ny andramena, hatrany Sina. Tamin’ity taona ity, anarivony taonina ny andramena tratran’ny ladoany tany ivelany, toy ny tany Sri Lanka, ary nihoatra lavitra ny tombatombana tahiry (manodidina ny bolabola 22.000) ny sarona tany amin’ny firenena iray. Ho an’ny minisiteran’ny tontolo iainana, efa nanolotra ny vahaolana sy ny drafitrasany izy ireo, ary nasian’ny rafitra iraisam-pirenena miahy ny varotra biby sy zavamaniry (Cites) fanamarihana. Voalaza fa amin’ny taona 2015 vao tena voavaha ny olana.
Ny hita aloha, io ambaran’ny AVG io fa mitohy ny trafika ary nanome toky ny minisitera fa tsy tokony hisy intsony izany. Koa aiza ny vokatra azo tsapain-tanana ?
By Alpha world at 09 h 39